Ndị na-ekwu okwu Ikea, mkpa ọ dị imelite Mac na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma nke izu na m si Mac | esi m na mac
Ndị na-ekwu okwu Ikea, mkpa ọ dị imelite Mac na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke kacha mma n'izu na m si Mac
N'izu a, anyị na-alọghachi mgbe ọtụtụ ụbọchị ezumike maka ezumike ekeresimesi na anyị na-alaghachi dị ka mgbe niile, jupụtara na ume na akụkọ metụtara ụwa Apple. Anyị chọrọ kelee afọ ọhụrụ nye onye ọ bụla n'ime unu na ị na-anọnyere anyị kwa ụbọchị, ma na webụ, yana dị iche iche na-elekọta mmadụ netwọk na na Apple podcast na anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ Actualidad iPhone otu.
N'izu nke abụọ nke afọ ọhụrụ 2022, asịrị na akụkọ banyere ngwaahịa Apple anaghị akwụsị, ma e nwekwara ụfọdụ akụkọ na-akpali mmasị anyị chọrọ ịkọrọ unu niile taa, Sunday. Yabụ Ka anyị gaa na isi ihe n'izu a na m si Mac.
Anyị na-amalite na akụkọ Ikea na ọhụrụ ya ndị na-ekwu okwu ụlọ akwụkwọ na-adaba na AirPlay 2. N'okwu a, ọ bụ mmelite zuru oke nke ndị na-ekwu okwu na-eme ka ha bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma na mpaghara a. Ụda dị mma sitere n'aka Sonos na Ikea imewe.
Anyị na-aga n'ihu na akụkọ banyere mkpa ọ dị imelite Mac anyị na ụdị kachasị ọhụrụ dị. N'okwu a ọ bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke macOS Big Sur na macOS Monterey ulo oru site Apple a mgbe gara aga na ugbu a ngwọta maka nnukwu nsogbu nchekwa.
n'izu a ụfọdụ Ọrụ Apple kwụsịrị ịrụ ọrụ awa ole na ole. O yiri ka nsogbu ahụ emeghị ogologo oge iji dozie ma dị ka anyị niile maara na Apple ọ bụla ọdịda na-ebuli na nke a ruru dị iche iche media dị ka o mere na aga n'oge. Ugbu a ihe niile na-edozi ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Iji mechaa anyị chọrọ ịkọrọ akụkọ gbasara ego enwetara Apple na-ebute ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ ndị a dị ka TSMC na-enweta ụfọdụ Uru dị egwu na-ekele ụlọ ọrụ Cupertino yana doro anya maka ọrụ ha onwe ha na-arụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ndị na-ekwu okwu Ikea, mkpa ọ dị imelite Mac na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke kacha mma n'izu na m si Mac
Otu esi edezi faịlụ PDF na Mac
MacBook Pro sitere na etiti 2012 ka Apple na-ewerelarị Vintage